Outer Banks – Gold Channel Movies
အခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ကားလေးကတော့ Outer Banksဆိုတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ်
ဒါကတော့….. Outer Bank ဆိုတဲ့ ကျွန်းမြို့တစ်မြို့မှာ ကုစ်(ချမ်းသာတဲ့သူတွေ)နဲ့ ပိုဂ်စ့်(ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ)ဆိုပြီး ကျွန်းတစ်ဖက်ဆီမှာနေကြတဲ့သူတွေရှိတယ် ပိုဂ်စ့်တွေနေတဲ့ဘက်မှာတော့ ဂျွန်ဘီ ကီအာရာ ဂျေဂျေ ပုတ် ဆိုတဲ့ လုပ်ချင်တာလုပ်ပြီး ပျော်ပျော်နေတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တော်တဲ့နေရာတွေမတူတဲ့ သူငယ်ချင်းလေးယောက်က တူတူနေထိုင်ကြတယ်
တစ်နေ့တော့…..မထင်မှတ်ထားဘဲ သူတို့ကျွန်းကိုဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းက ဝင်တိုက်လာပါတော့တယ် …. မုန်တိုင်းပြီးနောက်တစ်ရက်မှာပဲ ဂျွန်ဘီတို့သူငယ်ချင်းလေးယောက်က လုပ်နေကျအတိုင်း စိမ့်မြေဘက်ကိုသွားပြီး ငါးဖမ်း အပန်းဖြေလိုက်စစ်ကြရင်း…….မြုပ်နေတဲ့လှေတစ်စီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်…….
ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ အဲ့လှေပေါ်ပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုက ဂျွန်ဘီရဲ့ ရတနာသွားရှာရင်းပျောက်သွားတဲ့အဖေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့……… ဂျွန်ဘီရဲ့အဖေက အသက်ရှင်နေသေးတာလား သူ့အဖေသွားရှာတဲ့ရတနာတွေကရော ဘယ်နားမှာရှိနေတာလဲ တကယ်ပဲအဲ့ရတနာတွေကို ဂျွန်ဘီတို့ကရပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေဖြစ်လာနိုင်မှာလားဆိုတာကိုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
သူငယ်ချင်းလေးယောက်ရဲ့တိတ်တဆိတ် ရတနာရှာရင်း ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းရတဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ရှုရမှာပါ
Season 1 Translated and Review By Lina and Thein Naing Oo
Season2Translated and Review by MaryChrist, Lai Laii, Phyu Sin, Ru Na & Sunny
DeannaSeptember 5, 2021Reply
asmr it (http://tinyurl.com/ydzve7h4)’s really very difficult in this busy life to listen news on Television, thus I only use web for
YongSeptember 3, 2021Reply
It seems too complicated and asmr (http://tinyurl.com/) extremely broad for
VeronicaSeptember 2, 2021Reply
Excellent web site you have got here.. scoliosis surgery it‘s
EloisaSeptember 2, 2021Reply
GracieAugust 30, 2021Reply
of the story. I was surprised that you are not more popular since you surely have the gift.
My web page :: quest bars why – http://bit.ly –
GennieAugust 28, 2021Reply
Here is my page – when web hosting
David SiAugust 9, 2021Reply
Season2လေး ထပ်တင်ပေးပါဦး
Ei eiAugust 7, 2021Reply
Thanks so much .. looking forward to season2& season3ASAP please
TNSAugust 3, 2021Reply
VeronicaMay 5, 2020Reply
no link ep9and ep10 please..Thank you
SarahMay 5, 2020Reply
There is no link foe ep7to 10.. please upload please
myo gyiApril 30, 2020Reply
ep5to ep 10 no links.
loneApril 29, 2020Reply
Min Thit HtunApril 28, 2020Reply
Fargo (2014 –